Sawirradaha Qabow oo ay ku jiraan Sawirro Fudud iyo Fikrado Midab leh oo ka yimid Qalabka Kaadhka Midabka - Scantegrity
Sawirradaha Qabow oo ay ku jiraan Sawirro Fudud iyo Fikrado Midab leh oo ka yimid Qalabka Kaadhka Midabka
Dunida bilaa farshaxanku waa eh !, iyo rinjiyeysigu waa mid ka mid ah farshaxankayga aan jeclahay. Dhamaantiin waad wada ogtihiin in qaybta ugu adag ee rinjiga la bilaabo. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan kartaa inaad ogaato sawirro qabyo ah ama xitaa sawir fudud oo rinjiyeyn ah oo aad ku bilowdo. Hagaag, way fiicantahay hadii aad sahamiso xirmo qurux badan oo fikrad fiican ka noqon kara sawirkaaga xiga. Waxaad aragtaa, waxaa jira fara badan oo farsamo rinjiyeyn ah oo aad dalban karto. Maaha in la xuso, way fiicantahay in rinjiyeynta labixiyo
Caqli ahaan, maqaalkani wuxuu ku tusi doonaa qaybo badan oo sawirro ah oo tumbini ah oo u dhexeeya minjo qabow ilaa kuwa fudud. Dabcan, waad ku dalban kartaa saldhig kasta oo sawiro ah. Runtii rinjiyeynta ayaa la mid ah sida sawir qaadista. Labaduba waxay leeyihiin hal ujeedo oo ah in la abuuro muuqaal awood u leh inuu sheeko sheegto. Waxaad ku abuuri kartaa sheekada canvas mtu ama xitaa dhul khiyaali ah.
Maxaad Ka Taqaanaa Rinjiyeynta?
Hagaag, rinjiyeynta waa qeyb ka mid ah fanka. Markaad maqasho wax ku saabsan ranjiyeynta, waa inaad dib u xusuusisaa bursh, rinji, mindi palette, isbuunyo, iyo cadayga hawada sidoo kale. Dabcan, rinjiyeynta ayaa ah natiijada ficilka sawirku waa shay.
Dhib malahan, waxaad dhihi kartaa rinjiyeynta waxaa loo arkaa inay tahay farshaxan sida ay ula xiriirto qaabkeeda halkii ay ka ahaan lahayd qaabkeeda ama xitaa farsamadeeda. Haa, farshaxanka farshaxanka iyo rinjiyeynta saliidu waa laba nooc oo rinjiyeynta. Waad aragtaa, rinjiyeynta arcylic waa wejiga casriga ah ee farsamada rinjiyeynta. Marka, haddii aad rabto inaad abuurto wax casri ah, acrylic tehnique ayaa ku habboon in la dalbado.
Waa maxay 32 Noocyada rinjiyeynta Tehcnique?
rinjiyeynta ‘Encaustic rinji’
Tromp L sababtaeil
Iyo, Waa maxay Qaababka Rinjiyeynta?
Macluumaad ahaan, waxaa jira labo nooc oo rinjiyeyn ah oo ay tahay inaad ogaato. Firt koowaad waa qaabka reer galbeedka midka labaadna waa qaabka bari. Firt of all, halkan waa liiska hababka reer galbeedka ee rinjiyeynta:
Sawirka Sawirka / Sawirka Sawirka
Farshaxanka ‘Deco’ – farshaxan muuqaal ah, naqshad dhisme iyo naqshadeyn
Art Nouveau – dabeecadda ayaa dhiirrigelisay
Dhanka kale, qaababka fudud ee rinjiyeynta ayaa ah:
Sawirada Hindida: Tanjore, Mughal, Rajasthani iyo Pattachitra
U adeegso Xulashada Midabka si aad u Hesho Dhiirrigelinta Midabka
Imisa idinka mid ah oo ka caajistay adeegsiga midab isku mid ah sawiradaada? Hagaag, waxaad ubaahnaan kartaa inaad ogaato in midabeeyaha midabka ahu uu ku siin karo wax kabadan 1.8 milyan oo fikradood oo midab ah. Waxaan ula jeedaa, markaad aragto sawir, waxaad ka heli kartaa midab aad rabto inaad ku dabaqdo rinjigaaga. Laakiin, maxaa dhacaya haddii aadan magacaabi karin midab aad rabto inaad isticmaasho? Waad wareersan doontaa!
Caqli ahaan, haddii aad isticmaasho midabeeyaha midabka leh, waxaad ogaan doontaa liiska midabaynta midabka gudaha sawir, muuqaal, ama sawir. Macluumaad ahaan, aaladdu waa fududahay in la isticmaalo waxayna ku qaadan doontaa ilaa hal daqiiqo. Kaliya waa inaad diyaarisaa sawirka aad rabto inaad falanqeyso midabka waxaadna ka heli doontaa faahfaahinta muuqaalka. Macluumaadka qaar ee aad ka heli karto waa magaca midabka, RGB, iyo HEX sidoo kale. Waa maxay qalab fiican, miyaanay ahayn?
Sidee loo Isticmaalaa Maqaarka Midabka?
Waxay umuuqataa inaadan sugi karin inaad isticmaasho midiyaha. Sidaa darteed, iyada oo aan sabab kale oo macquul ahi jirin, waxaad sahamin kartaa talaabooyinka isku xigxiga ee loo adeegsado soo jiidashada midabka. Waa kuwan halkan!
Tallaabada 1: Ka hel Sawir, Sawir, ama Sawir Qalabkaaga
Waxa ugu horreeya, waxaad u baahan tahay inaad heysato sawir, sawir, ama waxaad ugu yeerto sawir ahaan aaladdaada. Dabcan, waad ka soo degsan kartaa internetka. Ka sokow, waxaad sidoo kale iska shaashadda kartaa il gaar ah. Haddii aad leedahay kamarad, sidoo kale si toos ah ayaad u qaadi kartaa sawir shayga.
Tallaabada 2: Ku sawir Sawirka, Sawirka, ama Sawirka Sawirka Qalabka Kaarka Midabka
Haddii aad aragto, aaladda soo socota ayaa ku siineysa meel aad ku sawirto sawirka. Hagaag, waxaad ubaahantahay inaad sawirto sawirka saxda ah, sawirka, ama sawirka.
Tilaabada 3: U Dhow Sharaxaada Sawirka
Markaad sawirka gashid kadib, waxaad ubaahantahay inaad kudarto qeexitaan. Caqli ahaan, waa inaad ku qortaa afar kalmadood inaad ku dhameystirto garoonka.
Tallaabada 4: Guji badhanka “Gudbi”
Iyo, waxaad riixi kartaa batoonka gudbinta si aad ugu sii waddo tallaabada xigta.
Tallaabada 5: Sahaminta Natiijooyinka Soo helitaanka Midabka
Ugu dambeyntiina! Waad gudbisay sawirka. Hadda, waxaa jiri doona midabbo shaashad ah. Dabcan, waxaad awoodi doontaa inaad aragto faahfaahinta sida HEX, RGB, iyo magaca midabada. Waxaad ku celin kartaa tillaabooyinka adigoo adeegsanaya sawirro kala duwan, sawirro, ama sawir-qaadayaal si aad u hesho midabbo cusub. Nasasho!
Waad aragtaa, sawirka aad soo gelisay wuxuu leeyahay midabo kala duwan.
Hadda, waad u dalban kartaa midabadaas fikradahaaga ranjiyeynta.